သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ » သဘာဝဆေးဖက်ဝင်
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe | ရေးသားသူ Dr . Phyu Mon Latt
ရာသီတုပ်ကွေး မေမေ ဖျားနာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကိုယ်ခံအား ကိုဗစ် မုတ်သုံ မိုးရာသီ နနွင်း ငရုတ်ကောင်း အရိုးတွေ အစာခြေစနစ် ပြဿနာ
ကလေးအာဟာရ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဇွန် 5, 2020 .2mins read
ဖက်ဖယ်ရွက် က ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲဆေးဖက်လည်းဝင်ပါသေးတယ်။ အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်သုံးပါတယ်။
သဘာဝဆေးဖက်ဝင်, သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ ဇန်နဝါရီ 1, 2020 . 1 min read
ငရုတ်ကောင်း နံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ဆို ဟင်းခါးလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မုန့်ဟင်းခါးလေးဖြစ်ဖြစ် အတော်ခံတွင်းမြိန်ကြတယ်မလား။ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးကရော
သဘာဝဆေးဖက်ဝင်, သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ နိုဝင်ဘာ 4, 2019 .2mins read
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ငရုတ်ကောင်း ထိပ်ကပ်နာ ဆား ရေ ပျားရည် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ချောင်းဆိုး ချင်း လည်ချောင်း အစာခြေစနစ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ
သဘာဝဆေးဖက်ဝင်, သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ ဩဂုတ် 27, 2019 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 11, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 6, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 11, 2020 .2mins read